हामी सधैं बलिका बोका — डिल्लीराज अर्याल – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
हामी सधैं बलिका बोका — डिल्लीराज अर्याल
फेरि पनि मन्त्रीहरूको फेरबदल, विपक्षीको विरोध, गुटगत अदलबदलमै छौँ र रहन्छौँ हामी । त्यो भन्दा अगाडि जाने सोच छैन किनको जानु पनि छैन । नजाने गाउँको बाटो किन सोध्नू ? अरू अगाडिका कुरा त अरूले उठाउने हो, उठाइरहन्छन् । अरूले खोज्ने हो, खोजिरहन्छन् । राजनीति गर्नेहरू त सत्तामा जाने हो पाइएन भने बाहिर बसेर विरोध गर्ने हो । दलभित्रै पनि गुट बनाएर छिर्के हान्ने हो ! अरूलाई गलहत्याएर भए पनि पदमा आफू जाने हो । यस्तै यस्तैमा रुमलिएका छौँ हामी ।
हाम्रो चरित्र र व्यवहार हेर्दा लाग्छ— यहाँ बहुमत वा दुई तिहाई मत पाए पनि कुनै दलको सरकार पूरा अवधि चल्दैन, चल्न सक्दैन । सरकार पूरा अवधि चल्ने नचल्ने कुराको निर्णय मतले (भोटले) होइन, मतले (विचारले) गर्छ । मत नै गरौँ भन्ने भन्दा आफू पुगौँ, आफ्नालाई पुर्‍याऔँ र सधैं हालिमहाली गरौँ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले सधैं विरोध हुन्छ, सधैं कि आफू पुग्ने कि ढलाउने दाउ हुन्छ ।
बीपीको दुई तिहाईको सरकार ढलेदेखि, अहिलेसम्म कुन वा कसको सरकार पूरा अवधि टिकेको छ र अबको टिक्छ ? गिरिजाप्रसादको बहुमतकै सरकार ढल्यो । अरूका, अल्पमतका, मिलिजुलीका त कुरै छोडौँ ।
जुन देशमा दुई तिहाई मत पाएका सरकार पनि टिक्दैनन् त्यो देशको राजनीति कस्तो हुन्छ ? त्यहाँका नेताले के राजनीति गर्छन् ? कस्तो राजनीतिक परिकल्पना गर्छन् र धाक लाउँछन् ? जनताले के देखेर, किन पत्याउँछन्? बुझिसाध्य छैन, तैपनि चलेकै छ । चल्न असजिलो पनि छैन । त्यसका लागि एउटै सूत्र छ — त्यो हो दोष जति अरूलाई । हो, अरूलाई दोष लाइदिएपछि सबै कमी कमजोरीबाट उम्किन पाइयो । यसै हुँदै आएको छ । यसमै अभ्यस्त भएका छौँ हामी ।
दोष कसैले नबोक्ने अभ्यासमा त हामी परिपक्व भइसक्यौँ । यो त अब हाम्रो राजनीतिको मूल प्रवृत्ति नै बनिसक्यो । कसैले दोष बोक्ने, कमजोरी सच्याउने कुरै भएन । त्यस्तो व्यक्तित्त्व कोही जन्मँदा पनि जन्मेन ।
नेता, कार्यकर्ताहरू भन्छन् ‘टिक्न दिएनन्’ ‘काम गर्न दिएनन्’ । काङ्ग्रेसले त्यसै भन्यो, भन्दैछ । नेकपाले त्यसै भन्नेछ । जो गए पनि गर्ने काम र भन्ने कुरा यिनै र यस्तै हुँदै आयो, भोलि पनि यस्तै र यिनै हुनेछन् । फरक हुने लक्षण पनि देखिन्न । यसको तात्पर्य ‘केही गर्छु, केही गर्नुपर्छ’ भन्ने भावना नहुनु नै हो ।
“राजाले चल्न दिएनन्, नेकपाले चल्न दिएन, काङ्ग्रेसले चल्न दिएन, …” उत्तर वा कारण सधैं यही र यस्तै हुन्छ, हुनेछ । दोष अरूलाई लाएर आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास सधैं चलिरहेछ र चल्नेछ । सधैं सत्ताले विपक्षीलाई र विपक्षीले सत्तालाई दोष लाउनेछन् । आफूहरू एकदम सफा, निर्दोष, इमान्दार भएको घोषणा गर्दै जनता सामु जानेछन् । जनताले पत्याएर फेरि पनि भोट दिनेछन् र सत्ता फेरि पनि पूरा अवधि नपुग्दै ढल्नेछ, ढलाइनेछ । यो खेल चलिरहनेछ र हामी दर्शक बनेर हेरिरहनेछौँ ।
सात सालदेखि अहिलेसम्म कहिले राजालाई देखाएर, कहिले पञ्चायतलाई देखाएर, कहिले कम्युनिष्टलाई देखाएर र कहिले काङ्ग्रेस वा अरू कसैलाई देखाएर हामीलाई ढाँटिरहे । आज लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई देखाएर ढाँट्दैछन् र पनि हामी पत्याउँदैछौँ, ढाँटिदैछौँ । अगाडि घाँस देखाएर काट्न हिडालेको बोको बनेको पत्तै पाएका छैनौँ हामीले । डोरो, दाम्लोबाट फुत्किए पनि डोर्याउनेकै पछि लाग्ने र काटिने बोको बन्यौँ हामी । पराधीन भए पनि स्वाधीन भए पनि पछि लाग्ने र हरेक पञ्चबलिमा, महाअष्टमीमा… अरूअरूमा काटिने, बलि दिइने बोका हामी ! यसमा तपाईँको सहमति नहुन सक्ला तर …। समग्रमा यही र यस्तै हुने गरेको छ ।
हाम्रो मानसिक विभाजन, फाइदामुखी, व्यक्ति वा परिवारमुखी, गुट उपगुटका पछि लाग्ने प्रवृत्ति आदिलाई नै यी सबैका कारक वा दोषी भन्न, मान्न मिल्दैन र ? यसलाई अर्थात् यो प्रवृत्तिलाई नसुधारी अघि बढ्न सकिने कुनै आधार छ र ? छैन, तर सुधार गरिने लक्षण कतै देखिएको पनि छैन ।
प्रकाशित मिति: 2019-02-21 2019-02-21 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged डिल्लीराज अर्याल नेपालको राजनीति बालिका बोका
सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गर्ने सरकारी चिकित्सकको तयारी
काठमाडौँमा चिनिया क्यालिग्राफी तथा चित्रकला प्रदर्शनी
अपराधी जुनसुकै ओहोदाको भए पनि कारवाही हुन्छः प्रम
Tags: डिल्लीराज अर्याल, नेपालको राजनीति, बालिका बोका